Ngwaọrụ na akụrụngwa na Igbo | Safeguarding Resource and Support Hub
Ngwaọrụ na akụrụngwa na Igbo
Nnọọ na n’Ebe Nhiwe RSH nke Naịjirịa na Igbo
Akụrụngwa Nchekwa na Ebe Nnyemaka Nhiwe (RSH) na-ele anya inyere otu ndị nọ na ngalaba enyemaka iwusi iwu nchekwa ha ike ya na omume na-emegide mmegbu nke Ịkwasa iko, mmegbu na Ịkwasa iko n’ike (SEAH).
Ebe Nhiwe nke Naịjirịa so na mpaghara RSH mana a rụrụ ya n’ụzọ pụrụ iche maka inyere otu ndị nọ n’ime obodo na-arụ na ngalaba enyemaka (mmepe na mberede) na Naịjirịa aka. Anyị nwere onye nnochita anya nke obodo bi n’Abuja nke na-ahụ maka Ebe Nhiwe nke Naịjirịa na-ahụkwa na Ebe Nhiwe a na-enyere gị aka na mkpa nchekwa gị otu o kwesiri.
Ị ga-ahụkwa ngwaọrụ na akụrụngwa niile nke dị na Igbo n’okpuru ebe a.
Ngwaọrụ na akụrụngwa niile dị na Igbo ka e zipụtara n’okpuru, ma ndị bụ RSH ma ndị na-abụghị RSH
ABCHD nke Ichebe infografiki
Ebumnoobi ABCHD Infografiki bụ iwetara obodo ọha Naijirịa ụzọ dị ọsịsọ ma dịkwa mfe a ga-ei cheta eziokwu dị na ihe gbasara ichekwaba ụmụaka n'aka ndị ọrụ maka nwakpo n'ike. Onye rụpụtara ya izizi…
Ezi Mmeme Nchekwa nke ndi CSO na ọrụ enyemaka na ọnọdụ mmepe
Mmeme Nchekwa nke CSO na ọrụ enyemaka na nhazi mmepee site na ihe onyionyo esere ma dekwa ede. Ihe onyioyo esere ma dekwa ede na eso akwụkwọ etu esi Emepụta ma Nyefe nhazi mmeme Nchekwa enwere ebea…
Ntule / Nyocha nke obodo Naijiria
A na-eme nyocha obodo iji nye ihe akaebe nke nwere ike ịkọwa pụta atụmatụ nke mba hubs maka Nchekwa ihe enyemaka nakwa nkwado Hub (RSH). Ụzọ di iche iche ka ewepụtara iji chikọta data na itule mba.…
Isi ihe sekpụ nti na-akpata Mmekpa mmekọahụ, mmegbu na inwe mmekọ nwoke na nwanyị na ụzọ na ezighiezi
Ozi infographic a na -egosi ma kọwaa isi ihe na -akpata na ihe ndị nwere ike ibute nrigbu mmekọahụ, Mmegbu na Iyiegwu mmekọahụ (SEAH) n'ime ngalaba enyemaka. Ọ na -enyochapụta ọrụ ike na ihe ùgwù dị…
Njem nke Nchekwa: Nkọwa gbasara Nchekwa
Ịchọpụta akọrọngwa nkuzi di mfe maka ezi nchekwa? RSH ewepụtala ihe ngosi nke na-enye nkọwa zuru oke maka nchekwa, nke gụnyere Mmekọahụ Nrigbu, Mmegbu na Iyiegwu Mmekọ anụahụ (SEAH). Ndi Otu di iche…
Nkwekọrịta na nzuzo (Nigeria)
Infographic a na -akọwa nkwenye mara ihe kpatara na ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ichebe yana otu esi achịkọta nkwenye ama. Ọ na -egosikwa ihe nzuzo bụ na otu nzukọ ga -esi hụ na ha na -akwado nzuzo ozugbo…